The anọ na nke ikpeazụ ebe m na-atụ anya na-eme nnyocha na ọgụ na mgba na-eme mkpebi na ihu nke ejighị ihe n'aka. Ya bu, mgbe niile philosophizing na adịzi, research ụkpụrụ ọma gụnyere ime mkpebi banyere ihe ime na ihe na-agaghị eme. O di nwute na, ndị a mkpebi mgbe a ga-mere dabere na-ezughị ezu ozi. Dị ka ihe atụ, mgbe emebe encore, na-eme nnyocha chọrọ ịma gbasara nke puru omume na ọ ga-eme ka mmadụ bịa leta ha uwe ojii. Ma ọ bụ, mgbe emebe mmetụta uche Contagion na-eme nnyocha chọrọ ịma gbasara nke puru omume na ọ nwere ike ịkpalite ịda mbà n'obi na ụfọdụ sonyere. Ndị a probabilities na-eleghị anya oké ala, ma ha bụ amaghị tupu nnyocha na-ewe ebe. Na, n'ihi na agaghi oru ngo n'ihu ọha esoro ọmụma banyere oghom ihe, ndị a probabilities na-adịghị na-adịkarị mara na ọbụna mgbe oru ngo gwụchara.
-Ejighị n'aka bụ bụghị nanị na-elekọta mmadụ nchọpụta na dijitalụ afọ. The Belmont Report, mgbe na-akọwa Ịhazi ntule nke ize ndụ na abamuru, n'ụzọ doro anya na-ekweta, a ga-esi ike gụpụta kpọmkwem. Ndị a na-ejighị n'aka, Otú ọ dị, ndị ọzọ siri ike digital afọ, na akụkụ n'ihi na anyị nwere obere ahụmahụ, na akụkụ n'ihi na nke e ji mara digital afọ elekọta mmadụ nnyocha.
Nyere ndị a na-ejighị n'aka ụfọdụ ndị akwadokwa ọchịchị n'ihi ihe dị ka "mma mma karịa ndo," nke bụ a colloquial version nke precautionary Ụkpụrụ. Ka a na obibia egosi ezi uche-ikekwe ọbụna ndị maara ihe-ọ pụrụ n'ezie ime ka nsogbu; ọ na-chilling ka nnyocha; na ọ na-akpata mmadụ na-eche na-ekwesịghị ime (Sunstein 2005) . Iji ghọta nsogbu na precautionary Ụkpụrụ, ka na-atụle mmetụta uche Contagion. The nnwale e zubere ka abuana ihe dị ka 700,000 ndị mmadụ, ma ọ na-na mberede na ndị mmadụ na nnwale ga ọjọọ. Ma, e nwekwara ụfọdụ ohere na nnwale nwere ike ikwenye ihe ọmụma nke ga-abụ bara uru Facebook ọrụ na otu. N'ihi ya, mgbe ohere na nnwale nwere ihe ize ndụ (dị ka e amply tụlere), na-egbochi nnwale na-a n'ihe ize ndụ n'ihi na nnwale nwere ike na-emepụta ihe bara uru ihe ọmụma. N'ezie, nhọrọ adịghị n'etiti eme nnwale ka ọ dị ma ghara ime nnwale; e nwere ọtụtụ ekwe omume mgbanwe na imewe ihe nwere ike webata a dị iche iche usoro ziri ezi itule. Otú ọ dị, ọ dị ebe, na-eme nnyocha ga-enwe nhọrọ n'etiti eme a na-amụ na-adịghị eme a na-amụ, na e nwere ihe ize ndụ ma mee ihe na ịgba nkịtị. Ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị na-anya naanị ihe ize ndụ nke edinam. Nnọọ nanị, ọ dịghị ize ndụ-free obibia.
Akpụ akpụ n'ofè precautionary Ụkpụrụ, otu ụzọ dị mkpa na-eche banyere-eme mkpebi nyere ejighị ihe n'aka na-ahụ ntakiri n'ihe ize ndụ ọkọlọtọ. The ntakiri n'ihe ize ndụ ọkọlọtọ mgbalị benchmark ihe ize ndụ nke a akpan akpan ọmụmụ megide ihe ize ndụ na sonyere ibido ha mụtara, dị ka egwu egwuregwu na-akwọ ụgbọala ụgbọala (Wendler et al. 2005) . Nke a na-bara uru n'ihi na adabere na ya kpebie ma ihe di ntakiri n'ihe ize ndụ bụ mfe karịa adabere na ya kpebie n'ezie larịị nke ihe ize ndụ. Dị ka ihe atụ, na mmetụta uche Contagion, tupu nnyocha malitere, ndị na-eme nnyocha nwere ike tụnyere ndị nke mmetụta uche ọdịnaya na ndammana na-ewere ọnọdụ News faili ntanetịime na nke mmetụta uche ọdịnaya na sonyere ga-ahụ na nnwale (Meyer 2015) . Ọ bụrụ na ndị News na-azụ n'okpuru ọgwụgwọ ndị yiri ndị ahụ ndammana ime na Facebook, mgbe ahụ, ndị nnyocha ahụ ike ikpebi na ihe nnwale bụ di ntakiri n'ihe ize ndụ. Na ha, ha pụrụ ime ka mkpebi a ọbụna ma ọ bụrụ na ha amaghị ndị zuru larịị nke ihe ize ndụ. Emekwa otu ihe ahụ nwere ike na-etinyere encore. Ná mmalite, encore triggered arịrịọ iji weebụsaịtị ahụ a maara ndị na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ, dị ka weebụsaịtị of iwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ná mba na repressive ọchịchị. Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ bụ na di ntakiri n'ihe ize ndụ nke sonyere na ná mba ụfọdụ. Otú ọ dị, adi version of encore-bụ nke na-triggered arịrịọ iji Twitter, Facebook, na YouTube-enwe ntakịrị arịrịọ n'ihi arịrịọ iji saịtị ndị ahụ na-triggered n'oge kwesịrị weebụ nchọgharị (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
A abụọ dị mkpa echiche bụ mgbe na-eme mkpebi banyere ọmụmụ amaghị ihe ize ndụ dị ike analysis, nke na-enye ohere na-eme nnyocha gbakọọ kwesịrị ekwesị size maka ha ọmụmụ (Cohen 1988) . Ya bụ, ma ọ bụrụ na ị na-amụ pụrụ ekpughe sonyere na n'ihe ize ndụ-ọbụna ntakiri n'ihe ize ndụ-mgbe ahụ, ụkpụrụ nke Beneficence-atụ aro na ị chọrọ ịmanye ndị kasị nta ego nke ihe ize ndụ mkpa iji nweta gị nnyocha mgbaru ọsọ. (Chegodị echiche banyere Belata ụkpụrụ na m tụlere n'Isi 4.) Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-eme nnyocha nwere ibu na-eme ka ọmụmụ ha dị ka nnukwu dị ka o kwere, research ụkpụrụ ọma na-egosi na anyị kwesịrị ime ka anyị na-amụ dị ka obere ka o kwere mee. N'ihi ya, ọbụna ma ọ bụrụ na ị maghị kpọmkwem larịị nke ize ndụ ị na-amụ na-agụnye, a ike analysis pụrụ inyere gị aka hụ na ọ bụ dị ka obere ka o kwere mee. Power analysis abụghị ihe ọhụrụ, n'ezie, ma e nwere otu ihe dị mkpa dị iche n'otú ọ bụ na e ji mee ihe na analọg afọ na otú ọ ga-eji taa. Na analọg afọ, na-eme nnyocha n'ozuzu mere ike analysis iji jide n'aka na ha na-amụ ọ bụghị kwa obere (ie, n'okpuru-kwadoro). Ugbu a, Otú ọ dị, na-eme nnyocha ga-eme ike analysis iji jide n'aka na ha na-amụ adịghị kwa nnukwu (ie, n'elu-kwadoro). Ọ bụrụ na ị na-eme a ike analysis na ị na-amụ na-egosi na-achọ buru ibu ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ, mgbe ahụ, nke ahụ nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na mmetụta ị na-amụ bụ obere. Ọ bụrụ otú ahụ, i kwesịrị ịjụ ma a obere mmetụta bụ ya zuru ezu dị mkpa ịmanye dị ukwuu nke ndị mmadụ na-ize ndụ nke na-amaghị na size. Ọtụtụ mgbe, azịza ya bụ eleghị anya ọ dịghị (Prentice and Miller 1992) .
The ntakiri n'ihe ize ndụ ọkọlọtọ na ike analysis enyemaka ị tụgharịa uche banyere na imewe ọmụmụ, ma ha anaghị nye gị ihe ọ bụla ọhụrụ ozi banyere otú sonyere nwere ike iche banyere gị ọmụmụ na ihe ize ndụ ha pụrụ inwe ahụmahụ esoghị ná n'ọmụmụ ihe gị. Ụzọ ọzọ obibi ejighị ihe n'aka na-anakọta ozi ndị ọzọ, nke na-eduga usoro ziri ezi-omume nnyocha ndị e mere na haziri ọnwụnwa.
-Esonụ ajụjụ nke ọ bụla, zaghachirinụ na-nyere a ohere nke na ha nwere ike ịkọwa ihe ha zara. N'ikpeazụ, ndị zaghachirinụ-onye nwere ike nwere sonyere ma ọ bụ ndị recruited site na a Micro-ọrụ na ọrụ ahịa (eg, Amazon Mechanical Turk) -answer ụfọdụ bụ isi omume igwe mmadụ ajụjụ (Schechter and Bravo-Lillo 2014) .
Usoro ziri ezi-omume, nnyocha abụọ atụmatụ na m na-ahụ karịsịa mara mma. Mbụ, ha na-eme tupu a ọmụmụ e duziri, ya mere nwere ike igbochi nsogbu tupu nnyocha amalite (dị ka megide na-eru nso na nyochaa maka oghom Jeremaya mere). Nke abụọ, usoro ziri ezi-omume, nnyocha nwee na-eme nnyocha inwe multiple nsụgharị nke otu ọrụ nnyocha a iji na-amata na o ji ihe ndị metụtara ụkpụrụ itule nke nsụgharị dị iche iche nke otu oru Ngo a. One mmachi, Otú ọ dị, nke usoro ziri ezi-omume nnyocha ndị e mere bụ na ọ bụ anya otú na-ekpebiri n'etiti dị iche iche research aghụghọ nyere nnyocha e mere na-arụpụta. Na ikpe nke oké ejighị ihe n'aka ụdị ozi a nwere ike inyere ndu-eme nnyocha 'mkpebi; N'eziokwu, Schechter and Bravo-Lillo (2014) akụkọ agbahapụ a zubere ọmụmụ omume na-akpata nchegbu zụlitere sonyere na otu usoro ziri ezi-omume nnyocha e mere.
Mgbe usoro ziri ezi-omume nnyocha ndị e mere nwere ike ịbara adabere na ya kpebie Jeremaya mere ka chọrọ nnyocha, ha apụghị iru ihe gbasara nke puru ma ọ bụ ịdị njọ nke oghom ihe. Otu ụzọ nchọpụta ọgwụ obibi ejighị ihe n'aka na elu-ize ndụ ntọala na-haziri ọnwụnwa, na-abịaru nso nke nwere ike ịbụ ihe enyemaka ụfọdụ na-elekọta mmadụ nnyocha.
Mgbe anwale irè nke a ọgwụ ọhụrụ, na-eme nnyocha adịghị ozugbo ima elu ka a buru ibu enweghị usoro na-adakarị ule. Kama, ha na-agba ọsọ abụọ na ụdị ọmụmụ mbụ. Ná mmalite, na a-adọ m ikpe, na-eme nnyocha na-lekwasịrị anya karịsịa achọta a mma dose, na ndị a ọmụmụ abuana ole na ole nke ndị mmadụ. Ozugbo a mma dose a chọpụtara,-adọ II ọnwụnwa amata nrụpụta ọrụ nke ọgwụ, ọ bụ ike na-arụ ọrụ na a best-ikpe ọnọdụ (Singal, Higgins, and Waljee 2014) . Nanị mgbe adọ m na II ọmụmụ bụ ọgwụ ọhụrụ kwere ka-enyocharịrị na a nnukwu enweghị usoro na-achịkwa ikpe. Mgbe ahụ kpọmkwem Ọdịdị nke haziri ọnwụnwa eji na mmepe nke ọhụrụ ọgwụ ọjọọ nwere ike ịbụ ezi ihe kwesịrị ekwesị na-elekọta mmadụ nnyocha, mgbe anyị nwere ihe na-ejighị n'aka, na-eme nnyocha nwee ike na-agba ọsọ nta ọmụmụ n'ụzọ doro anya na e mere na-amata nchekwa na nrụpụta ọrụ. Dị ka ihe atụ, na encore, i nwere ike ichetụ n'echiche ihe na-eme nnyocha malite na sonyere na mba na ike na-achị-nke-iwu.
Ọnụ anọ ndị a na-eru nso-ihe di ntakiri n'ihe ize ndụ ọkọlọtọ, ike analysis, usoro ziri ezi-omume, nnyocha, na haziri ọnwụnwa-pụrụ inyere gị n'ihu na a ezi uche n'ụzọ, ọbụna n'agbanyeghị na nke ejighị ihe n'aka. Ejighị ihe n'aka ọ dịghị mkpa na-eduga ịgba nkịtị.